दिदी बहिनीले पुति सेभ - Nepali Sex Tube
दिदी बहिनीले पुति सेभ
बहिनीले भनि, ‘दिदी मेरो पुति सेभ गर्दे न!’
मेरो नाम सम्झना हो। घरपरिवारको अगाडी म जति सोझी कोही छैन तर मलाई थाहा छ म कस्तो भालु छु भन्ने। मेरी एउटी दिदी पनि छे। दिदीको व्बाइफ्रेन्ड पनि छ। उसको नाम विनोद हो। विनोदलाई म दादा भन्छु। मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ।
सुन्दरताकै कुरा गर्दा दिदी पनि उस्तै छे। तर मेरा दुध भने दिदीको भन्दा निकै ठूला छन्। यसको पछाडी पनि कारण छ। सानै देखि केटाहरुसंग जिस्कने अनि पाएको बेला चिकिहाल्ने भएकाले समयसंगै मेरा दुध साधारण भन्दा ठूला भएका छन्। आज यसरी पहिलो पटक लेख्दै छु, त्यसैले अलिअलि छाडा बोलेभने पनि अचम्म नमानि पढ्नुहोला।
मैले भर्खर ब्याचलर सके। अहिले जब गर्दै छु। मेरो केटीसाथी निकै कम छन्, ४-५ जना मिल्ने छन्। केटाको त कुरै नगरम। बाटोमा हिड्दा मात्रै १०-१५ जना त एकै दिनमा भेटिने गर्छन्। त्यसैले आजभोली सेक्स गर्न मनलागे कुनै आइतबार छैन। जुन बेला मनलाग्यो, जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ चिक्न सक्छु।
केटाहरु पट्याउने मामलामा पनि एक नम्बरकै छु। केटाहरुलाई पुति र दुध भए पुग्छ। बस्, एकपटक अगाडी गएर बोलेपछि मै हुँ भन्ने पनि पछिलाग्छन्। तर सबैलाई तिमी नै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो भन्छु, मेरो लाइफमा तिमी मात्र छौ भन्दा पनि सजिलै पत्याउँछन् अनि मख्ख पर्छन्। अनि साथी भएर रिलेसन सुरु गर्छु। सुरुमै भन्छु, पछि i love u भन्न पाइदैन है भनेर। तर समय बित्दै गएपछि सबैकेटाहरु मरिहत्ते गर्छन्। कतिले त नाम लेखेर हात समेत काटे। त्यसैले एउटा केटासंग म बस्न सक्दिन। एउटैसंग चिक्दा मजा पनि आउँदैन। थरिथरि लाडोको टेस्ट लिँदाको मज्जा कस्तो हुन्छ चिकाउनेलाई मात्र थाह हुन्छ।
चिक्ने चिकाउने कुरा त छँदैछ। कोठमा बस्दा पनि उस्तै सेक्सी भएर बस्न रुचाउँछु। टाइट हाफ पाइन्ट लगाउन मज्जा आउँछ। अनि दुध अत्याधिक ठूलो भएको कारण घरमा ब्रा नलगाई बस्छु।
दिदीलाई पनि मेरो धेरै व्बाईफ्रेन्ड भएको बारे थाहा छैन। दिदीलाई त यो पनि थाहा छैन कि दिदीको विवाह फिक्स भएको विनोद (मैले दादा भन्छु)संग पनि मेरो चिकामारी भइसकेको छ। त्यो पनि कोठामै, दिदी घर गएकी बेला। त्यसपछि मेरो दुधको फ्यान बनेका मेरो हुनेवाला भिनाजु खाली चिकम चिकम गरिरहन्छन्। मलाई भने एक पटक चिकेपछि नयाँ केटाको लाडो चाहिने हुन्छ।
यहाँ भन्न मलाई लाज लाग्दैन किनकी तपाईले मलाई देख्नु भएको छैन।
मैले कतिपटक त अलिक धनी विवाह गरिसकेका केटाहरुलाई समेत चिकेको छु। अनि चिकेबापत पैसा समेत लिएको छु। यसरी धनीधनीलाई चिक्नुको फाइदा निकै छ, एकातिर पैसा पनि पाइने, मजा पनि हुने अर्को तिर दामी दामी होटल अनि रिसोर्टमा झ्याप्प भएर रमाइलो गर्न पाइने। तर सधैँ यस्तो मजा पनि लाग्दैन। कहिले काँही केटाहरुलाई तड्पाउन बडो मजा आउँछ। बिचारा कोही यस्ता सोझा पनि हुन्छन्, मलाई भर्जिन ठान्ने अनि त्यहि अनुसार व्यवहार गर्ने केटाहरु पनि टन्नै भेटेको छु। बिचाराहरुलाई केही कारण देखाएर ब्रेकअप दिनुपर्छ महिनौ दिन पागल भएर बस्छन्।
आजभोली अलिक मोटाएकी छु, साह्रै होइन ठिक्क, सेक्सी देखिने गरि। कोठामा ऐना अगाडी उँभिदा आफु जस्तो त यो संसारमै अर्को केटी छैन होला जस्तो लाग्छ। मिलेको आँखा, मेकअप नै गर्नु नपर्ने गोरो सफा छाला, अझै गुलावी लिपस्किट लगाएपछि त कुनै राम्रो क्यारेक्टरकै केटी जस्ती देखिन्छु, कसैले देखेर शंका गर्न समेत सक्दैन म कस्तो भालु छु भन्ने। बाटोमा हिड्दा कुनै राम्री केटी देखेपनि यीनीहरु पनि म जस्तै लुकिछिपी भालु होलान् त जस्तो लाग्छ। जस्तो आफु त्यस्तै अरु देखिने के।
मलाई कालो कुर्ता सुरुवाल लगाउन निकै मनपर्छ। सुरुवाल टाइट लगाउन मनपर्छ। ताकि मेरो तिघ्रा र पुठो प्रष्ट देखियोस्। कुर्ता पनि क्लिभेज प्रष्ट देखिने गरि मिलाएर सिलाउन दिन्छु, अनि सल अलि लत्रिने गरि, दुध नछोपिने गरि ओढ्छु। बाटोमा केटाहरु पटक पटक मेरो दुधतिर आंखा लगाउँदा कहिलेकाँही त सिरिङ्ग पनि हुन्छ।
कुनै बेला त सेक्सको यस्तो सिक भएको थिए कि एउटा डिल्डो किनेर पुतिभित्र हालेरै पनि हिडे। सानो डिल्डो भित्रै छिर्थ्यो। बाटोमा हिड्दा, प्रत्येक खुट्टा चाल्दा पुतिमा डिल्डो थोरै भित्र बाहिर गर्थ्यो। अनुहार रातो हुन्थ्यो अनि प्रत्येक पाइलामा मज्जा आउँथ्यो। संगै भाइब्रेटर पनि जोडिएकाले बसमा बस्दा खल्तीमा रहेको रिमोट दबाउँथे, पुति भित्रको भाइब्रेटर भाइब्रेट हुन्थ्यो। बिचारा साइडको सिटमा बस्नेलाई पत्तो समेत हुन्थेन आफुभने बिनालाडो पुतिको चिलाइ मार्दै बस्थे।
एक समय निकै दिन काममै व्यस्त भएँ। केही हप्ता सेक्स पनि गर्ने समय जुरेन। कस्तो चिकम चिकम लाग्न थालिसकेको थियो। शनिबार र आइतबार लगातार बिदा पर्यो। शनिबार दिदी पनि कोठामै थिई। भर्खर चिनजान भएको एउटा केटालाई आइतबार भेट्न डाकेको थिए। आइतबार दिदीको घुम्ने प्लान बनिसकेकाले त्यो केटालाई कोठामा ल्याउन मिल्थ्यो। केटो सोझो थियो, त्यसैले पहिलो पटक सेक्स होला त्यस्तो भनेर राम्री बन्ने बिचार आयो। पुति अनि चाक वरिपरिका रौँ सेभ गर्ने विचार गरे। पुतिको त गर्न सजिलो थियो, चाकको कसरी गर्ने? दिदीलाई भन्ने सुर कसे। निकै पटक दिदीको खुट्टा सेभ गरेको थिए। त्यसैले दिदीलाई सेभ गरिदिन्छेस् भनेर सोधे?
दिदीले ‘आ सक्दिन’ भनी।
‘गर्दे न, आफुले सक्ने ठाउँको भए त भन्दै भन्थिन’ भने।
‘कहाँ गर्ने हो र?’, दिदीले प्रश्न गरि।
‘भित्र!’ मैले हाँस्दै हातले इशारा गरेँ।
‘पहिल्यै भन्नुपर्छ नि, सफाचट्ट गर्दिन्छु’, दिदीले हाँस्दै भनी।
एकअर्काको अगाडी नाङ्गो हुनु संगै बसेको दिदी बहिनीको लागि कुनै नौलो कुरा होइन। कयौं पटक त नाङ्गै दुवै अंगालो हालेर सुतेका पनि छौ। तर यसरी पुतिमै सेभिङ गर्नुपर्ने गरि भने अहिलेसम्म अवस्था आएको थिएन।
मैले लगाएको हाफ पाइन्ट खोले। अनि पेन्टी खोले। सामान्यतया लुगा फेर्दा नाङ्गो हुनु सामान्य भएपिन यो पटक खै कि दिदीको अगाडी नाङ्गिदाँ अलिक रमाइलो लाग्दै थियो।
‘छि छि, कति लामो पारेकी, काट्नु पर्छ नि बेला बेलामा’, दिदीले हातले पुति वरिपरिको रौँ तान्दै भनी।
दिदीले त्यसरी रौँ तान्दा कस्तो काउकुती लागेर आयो।
‘अब दिदीले काट्दिन्छे नि त’, मैले मस्किदै दिदीको गाला ताने।
‘खोइ छोड्, अब मलाई डिस्टर्ब नगर।’, दिदीले भनी। आज दिदीलाई पनि रमाइलो लागेको होला, मैले सोचे।
दिदीले इलेक्ट्रिक रेजर निकाली। दिदीलाई त्यो विनोद दादाले गिफ्ट देको रे, पुतिको रौँ काट्न। कति हास्नु।
धन्न योपटक मलाई पनि काम आयो। खाटमा अढेस लगाएर म भुँईमा टांग फट्याएर बसेँ। दिदीले रेजर लगाउन थाली। बाफरे! पुतिको डिल वरिपरिको रौँ काट्दा त्यसको भाइब्रेसनले त मलाई उत्तेजित पार्यो। दिदीले बिस्तारै एउटा रौ पनि रहनेगरि रेजर लगाउँदै गई। मेरो पुतिबाट त पानी निस्कन थाल्यो।
पछाडी फर्के। अनि चाकको प्वाल वरिपरिको रौं पनि त्यसरी नै काटिदिन थाली। पछाडीको सकिएपछि अगाडीको भागमा बाँकी देखिएका रौं काट्न दिदीले फेरी रेजर अन गरि। यो पटक त असह्य नै हुन थालिसकेको थियो। पुति रसाएर पानी बाहिरै निस्कन थाल्यो। दिदीले देखिहाली।
‘के गर्छे यो?’
‘एक्साइटेड भएँ के त्यसको भाइब्रेसनले’, मेरो रातो अनुहार देखेर दिदी लजाई।
पुति सफाचट भएको थियो तर कति समय देखि चिक्न नपा’को पुति जिस्कियो मात्र। अनि अनौठो आइडिया आयो। आज दिदीसंगै चिकामारी गर्नुपर्छ भनेर सोचे। दिदीलाई फकाउने कसरी? हुन्न भनि भने त आफ्नो इज्जतको फलुदा हुन्छ।
‘तेरो काट्नु छैन दिदी? छ भने लुगा फुकाल म काटिदिन्छु।’
अचम्म, दिदीले खुरुखुरु लुगा फुकालि। दिदीको पुति यसरी पहिले नजिकबाट देखेको थिइन। आकार उस्तै थियो तर दिदीको पुति मेरो भन्दा कलिलो रहेछ। बिचारी, चिकोस् त कलिलो नहोस्। तर एकदम प्वाँट थियो, आफु केटी भएर पनि दिदीको पुति देख्दा लोभ लाग्यो। चलाम चलाम लाग्ने।
म बसेको झै पोजिसनमा दिदी बसी। रेजर लिएर दिदीको छोटा छोटा रौँ खौरन थाले। रमाइलो हुने रहेछ। हालत त दिदीको पनि उस्तै भयो। रेजरको भाइब्रेसनले दिदीलाई त अति नै भएछ। आंखा चिम्म गरेर टाउको खाटमा अड्याइ। अनि दुवै हातले भुईमा टेकी। १० मिनेटमा दिदीको पुति त भर्खर १६ वर्षे तरुणीको जस्तै भयो। सफा अनि पुट्ट देखियो। त्यहि माथी तपतप पानी झार्न थाली। रेजर साइडमा राखे। अनि बिस्तारै दिदीको पुतिको डिलमा हातले चलाइदिँए। उसले मजा मानी। मैले पुतिबाट निस्केको पानी लगाएर उसको पुति वरिपरि मालिस गरेझै गरे। उ अति उत्तेजनामा आई। तर पनि केही भनिन। उसको टिसी चलाइदिए।
‘ahhhhhhh’ लामो स्वास फर्दै दिदी उत्तेजनाका स्वर निकाल्न थाली। उसको पुति भित्र औँला हालिदिएँ। निकै कम सेक्स अनुभव भएकी दिदीलाई यसो गर्दा नै असह्य भइसेकेको थियो। ‘ohhhhhhhhhh awwwwwwww’ गर्दै उ कराउन थाली।
सुरुमा एउटा औला मात्र छिराएको थिए। अब दुवै अौलाले उसको पुति भित्र बाहिर गर्न थाले।
‘सम्झना, अलि छिटो अलि छिटो…..uahhhhhhh’, उसले बिन्ती गर्न थाली।
निकै बेर उसको पुतिमा २-३-४ गर्दै एकसाथ औँला हालेर चलाइदिरहेँ।
‘खोइ छोड्, अब मेरो पालो’, दिदीले उत्साहित हुँदै भनी।
हामी दुवैले बाँकी रहेको लुगा पनि फुकाल्यो। अनि खाटमा पल्ट्यौ। एकअर्को दुध मुसार्दै किस गर्न थाल्यौंं। ओहो, केटीसंग किस गर्न त झनै मज्जा हुने रहेछ। त्यहि माथी मेरी च्वाँक दिदीसंग। हामी एक अर्काको दुध चलाउन थाल्यौं। दिदीले मेरो दुध उसको व्बाइफ्रेन्डले चुसेको झै चुस्न थाली। कस्तो भाग्य, दिदी भिनाजुको, एउटै दुधबाट आफुले पनि मस्ती गरे मलाई पनि आनन्द दिए।
हामी 69 पोजिसनमा सुत्यौं। मैले दिदीको पुति र दिदीले मेरो पुति चाट्न थाल्यौं। मैले दिदीको पुतिमा जिब्रो छिराए। उसको पुति भिजेर लपक्कै भएको थियो। नुनिलो उसको फुसी जिब्रो भरी लाग्यो। पुतिमा सकेजति जिब्रो छिराए। दिदीले मेरो पुतिमा जिब्रो खेलाई। अनि भित्र बाहिर भित्र बाहिर औँला हाल्दै जिब्रोले निकै मज्जाले चाटी। हामी दुवै ‘aahhhhhhhhh, ohhhhhhhhhhhhhhh’ गर्दै चिच्याउँदै थियौं। निकै बेरमा दुवैको orgasm भयो। अनि
हामी अंगालो हालेर केही बेर संगै सुत्यौं।